Asa fanakorontanana : Ampy izay, Tsy hitsitsy intsony” -
AccueilRaharaham-pirenenaAsa fanakorontanana : Ampy izay, Tsy hitsitsy intsony”
27/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hentitra ny filoham-pirenana nandritra ny kabariny teny amin’ ny lapam-panjakana Iavoloha, manoloana ireo izay tsy manao afa-tsy ny fanakorontanana ny firenena, tsy ahafahana mihoitra sy mandroso « ampy izay ny fanakorontanana, ny herisetra, ny fanaovana ny vahoaka ho tohatra fiakarana, ary ny fitsaram-bahoaka” . Nisy noho izany, ny baiko hentitra izay nomeny ireo tompon’andraikitra eto amin’ny firenena « ho anareo tompon’andraikitra fehezo ny olona eo ambany fifehezanareo, ary efa misy ny tatitra voaraiko mikasika ireo izay tsy nahavita izany amin’ny an-tsakany sy an-davany” torak’izany ihany koa ny baiko nomeny ireo mpitandro ny filaminana sy ny foloalindahy « ilaina ny fivoahan’ny fahamarinana rehetra ary tsy hijerena na iza na iza io, manantena anareo ny vahoaka”.Torak’ izany ihany koa ny fanentanana ny vahoaka hifanome tanana hiady amin’ ireo mpanararaotra sy mpanakorontana eto amin’ny firenena “hifanome tanana isika ary manainga ny vahoaka hifanome tanana hiady amin’ny herisetra, fitsaram-bahoaka ary hiaraka kosa hampitombo ny vokatra, hampandeha ny indostria malagasy, hikajy ny tontolo iainana, hampandroso ny firenena”. Manomboka izao izany dia tsy hitsisy n’iza n’iza ny fitondram-panjakana taorian’ny kabary izay notanterahin’ny Filoham-pirenena omaly, ireo rehetra ireo tokoa mantsy no sakana amin’ny fampandrosoana eto Madagasikara, satria dia misy ireo olona izay tsy mijery afa-tsy ny tenany ary mahazo tombontsoa amin’ny tsy filaminan’ny firenena. Ny vahoaka izay miandrandra rahateo ny fampandrosoana, ka tsy ny olom-bitsy mihitsy no lasa sakana amin’ izany hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Miainga tanteraka amin’ny fitoniana ara-politika rahateo ny fampandrosoana ka anisan’ny naha hentitra ny Filoham-pirenena ny fanajana izany.
Lesona ny tantara
Fanoitra ny tantara ary fangalana lesona ihany koa hoy ny Filoham-pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina, fanamby amin’ny fampandrosoana rahateo ny tantara hoy izy. Ahafahana mahita ny lesoka rehetra nisy tokoa mantsy ny tantara, hoy ny Filoham-pirenena ary anisan’izany ny antontan’isa izay nomeny « tao anatin’ny 57 taona nahazoana ny fahaleovantena dia 13 ny mpitondra nifandimby, ny 6 amin’ ireo ihany anefa no voafidim-bahoaka ary 2 ihany ny fifidianana tsy nahitana korontana, tsy azo hadinoina ireo satria ny dikany dia tsy vitan’ ny nametraka ny fototra ara-dalàna ary tsy nety ho marin-toerana ny fitondrana nifanesy”. Noho ireo rehetra ireo dia tokony handini-tena ny rehetra satria dia fotoana lehibe no very satria tao anatin’ny 50 taona noho ny tsy fisian’ny fototra dia “ny 80 isan-jaton’ny mpiray tanindrazana dia sahirana, vahoaka 11 tapitrisa no tsy manana rano fisotro madio, ny 80 isan-jaton’ny sekoly dia tsy lavorary, ary ny 15 isan-jaton’ny mponina ihany no manana herinaratra”.
Manoloana ny tantara, nahatsapana ny tsy fijerena ny vahoaka tany aloha, dia izao ny fitondram-panjakana no mijery ny ho avy mamiratra amin’ny alalan’ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa maharitra ahafahana miantoka izany. Hatramin’ izao tokoa mantsy dia mbola manafatra vary isika ary ambany noho ny afrikana izay nahitana ady toa an’i Zambie noho ny faharatsian’io fototra io, torak’izany ihany koa ny harin-karena. Ankehitriny, hoy ny Filoha, dia eo am-panarenana isika, ary izay anefa dia tsy ho vita vetivety “fisandratana mirindra no ilaina amin’izao ary ny asa fanarenana no efa hirosoana, ny tany aloha dia nisy ny mizana mitanila”.Tsy lavina tokoa mantsy ny mahazo ireo any amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy izay zary adinon’ireo mpitondra nifanesy ny nanarina sy nitondra ny fampandrosoana tany amin’iny faritra iny . Ankehitriny raha ny kabarin’ny Filoha mikasika io fampandrosoana io dia « ny fanomezana vahana ny fotodrafitrasa sy ny ny orinasa no laharam-pahamehana izay hiteraka fahatsaram-piainana ary izany izao no imasoana “.
Nandritra ny tetezamita dia firenena faharoa tsy nahazo famatsiana ara-bola i Madagasikara taorian’i korea Tavaratra, ary mbola anton’io ny firenena mitontongan-dava. Taty aoriana anefa dia efa misokatra amin’ny vazantany efatra i Madagasikara noho ny fipetrahan’ny fahatokisan’ireo mpamatsy vola, tsaroana etoana ny fivoriana tao Paris izay nahazoan’i Madagasikara tombontsoa. Izy ireo izay mahafantatra tsara ny ezaka natao teto amin’ny firenena. Anisan’izany ohatra ny fiaraha-miasa amin’ ireo firenena tavaratra izay nambaran’ny filoha fa “firenena tavaratra maro no miara-miasa amin’i Madagasikara hatsaraina ireo fiaraha-miasa ireo, ary hatao anatin’ny fandalinana tanteraka”. Azo lazaina eto fa tsy ataotao fahatany tokoa ny fifanarahana amin’ ireny mpamatsy vola ireny fa misy fandalinana sy am-pisainana tanteraka, izay ny tombotsoan’i Madagasikara ihany no tena jerena. Nanamafy aza ny Filoham-pirenena manoloana izao ezaka atao izao fa tsy misy vitan’ny fipetrepetrahana fa tsy maintsy misy ny asa tanterahina “asa fa tsy fahagagana no atao, ary tsy misy vokatra amin’ny fahagagana izany” . Nanao pi-maso ny vahoaka malagasy nandritra io kabary notanterahiny io ny Filoham-pirenena amin’izao ezaka izay atao izao, mba hifanome tanana tahaka izany koa ny antso ho an’ireo tompon’andraikitra mba hijery ny vahoaka “efa manantena anao ny vahoaka ho antoky ny fisandratana”.